Cabdiweli Maxamed Cali Gaas, Madaxweynaha Puntland [Sawir hore]
GAROOWE, Puntland - Madaxwaynaha Puntland, Cabdiweli Maxamed Cali Gaas, ayaa wasiir cusub uu umagacaabey Wasaaradda Degaanka iyo Isbedalka Cilimadda, taasoo masuulkii madaxda ka ahaa uu shaqada ka tegay maanta oo Sabti ah.
Wasiirka is-casilay oo lagu magacaabo Cali Cabdullaahi Warsame ayaa sheegay inuu shaqada isaga tegay kadib markii faragelin lagu sameeyay shaqada wasiiradiisa iyo maamul xumo.
Digreeto kasoo baxday Xafiiska Cabdiweli Gaas ayaa Saleebaan Xaaji Cabdulle Sandheere loogu magacaabay inuu noqdo wasiirka cusub ee Wasaaradda, kaasoo shaqada sii wadi doona.
Is-casilaadda Warsame ayaa kusoo aadeysa xili dhowaan Hay'adda Jarmalka laga leeyahay ay sababo musuq-maasuq u joojisey mashruuc dhul lagu dhisayey oo shacabka Puntland muhiim u ahaa.
Magacaabista Gaas uu sameeyey ayaa imaaneysa xilli bilooyin ay uga harsan tahay muda xileedkiisa 5-ta sano ee uu xafiiska ku joogey, xili shaki uu ku jiro hadii uu dib dambe isku soo sharixi doono 2019.
- WAR-SAXAAFADEEDKA -
Xeer Madaxweyne Lr.131 Sep 22, 2018, kuna saabsan magacaabid Wasiirka Wasaaradda Deegaanka iyo Isbadlka Cimilada.
Markuu arkay: Aqoontiisa, kartidiisa iyo waayo aragnimadiisa shaqo
Markuu la Tashaday: Madxaweyne ku xigeenka Dowladda Puntland
1.Waxaa Saleebaan Xaaji Cabdalle Sardheeye loo magacaabay Wasiirka Wasaaradda Deegaanka iyo isbadalka Cimilada
2.Xeerkani waxa uu dhaqan gelayaa markuu madaxweynuhu Saxiixo wuuna saxiixay madaxweynuhu.
Wasiirkii hore ayaa sheegay in shaqada xafiiskiisa la hoos geeyay Madaxtooyadda si loo...
Puntland 13.06.2018. 12:47